Keto Guru မြန်မာ, စျေးနှုန်း, အသံုးျပဳနည္း, တကယ့္ရလဒ္အစစ္ – ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ
Home Myanmar Keto Guru မြန်မာ, စျေးနှုန်း, အသံုးျပဳနည္း, တကယ့္ရလဒ္အစစ္ - ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ
အဝလွန်ခြင်းသည်လူများစွာအတွက်တကယ့်ပြနာဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဒုက္ခရောက်နေသည်။ အတွင်းပိုင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများသည်အဆီနှင့်ဖုံးလွှမ်းသွားပြီးပုံမှန်လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားသည်။ ထို့အပြင်အဝလွန်သူများသည်သူတို့၏အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောရှုပ်ထွေးသောအတွေ့အကြုံများကိုခံစားကြရသည်။ အမျိုးသမီးများရောအမျိုးသားရောပါနှစ် ဦး စလုံးသိကျွမ်းရန်ရှက်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်သင်စုဆောင်းထားသောအဆီများကိုအမြန်ဆုံးစတင်ရန်လိုအပ်သည်။
များထဲတွင် အဆိုပါ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးလူသိများတဲ့နည်းလမ်းများသတိပြုနိုင်သည်အစားအစာ, လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဘို့နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး။ သို့သော်၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင်အားနည်းချက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်အဟာရကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာထားရှိလျှင်၊ ခန္ဓာကိုယ်သည်လိုအပ်သောဗီတာမင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်များကိုမရရှိတော့သောကြောင့်၎င်းသည်နာကျင်လာသည်။ သင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုတိုးမြှင့်ထားပါကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ကုန်ခန်းသွားပြီးအဆီသိုလှောင်ခြင်းကို“ သိုလှောင်” လာသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း အတွက် ဆေးဝါးကုထုံးများထဲတွင် ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏ပါဝင်မှုကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည့်အရာများလည်းရှိသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းတဲ့နည်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါကုစားနည်းအားလုံးအသုံးမဝင်တာသတိရသင့်တယ်။ သက်သေပြနိုင်သောဆေးများကိုသာသင်ယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်။ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ Keto Guru အစားအသောက်များတွင်ဆေးပြား။
ဤကိရိယာသည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသသည့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာဒီကိရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တကယ့္ရလဒ္အစစ္ နှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက် ကိုဖတ်ပြီးအသေးစိတ် Keto Guru ဘာလဲ, Keto Guru အသံုးျပဳနည္း, ၎င်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ နှင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများဘာလဲ ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ပံု ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပြီးဘယ်မှာဝယ်ရမလဲဆိုတာရှာဖွေနိုင်သည်။ မြန်မာ အကောင်းစျေးနှုန်းဖြင့်။
ဘာလဲ Keto Guru?
ယခင်ကဤအဘို့, ကအထူးအစာအာဟာရကိုလိုက်နာ အနာရောဂါငြိမ်းစရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကိုခံယူ ခြင်း နှင့်ရိုးရာ, အေးဂျင့်ကိုအသုံးပြုရန်အသည်း၏အခြေအနေတိုးတက်စေရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်သင်သည်လူတိုင်းအတွက်ရိုးရိုးလေးနှင့်တတ်နိုင်သောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အကူအညီဖြင့်အဓိကသန့်စင်သည့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုအထောက်အကူပြုပြီးဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်တ္ထုများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်ခေတ်သစ်အော်ဂဲနစ်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပေါင်းစပ်မှုကိုအစပျိုးစေသည်။ အစားအစာကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ အကြိမ်ပေါင်းများစွာအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤသည်သည်လူ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမလိုအပ်သည့် အစားအစာ၏ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးလုံခြုံသောပုံစံဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဖော်မြူလာကိုအမေရိကန်နှင့်ဥရောပသိပ္ပံပညာရှင်များပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာလုံးဝသဘာဝကဖွဲ့စည်းမှု,, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်စွဲ ၏မရှိခြင်း အားဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းသည်အဝလွန်မှုအဆင့်အားလုံးအတွက်ထိရောက်ပြီး သိသာသောရလဒ်များကို လျင်မြန်စွာ ရရှိစေသည်။
စွမ်းအင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ကိုဘိုဟိုက်ဒရိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ငါတို့ကသူတို့ကိုချိုချဉ်၊ ပေါင်မုန့်၊ ဒါမမှန်ဘူး။ ၎င်းတို့ကိုသီးနှံများ၊ သစ်သီးများ၊ ငါးများ၊ အသားများမှလည်းရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအာဟာရသည်ပိုမိုအသုံး ၀ င်ပြီးသင့်ပုံကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
နိမ့်ပိုင်းတွင် အစားအစာဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည် တစ်ဦးကိုခွင့်ပြု ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထဲဝငျဖို့ ။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်စွမ်းအင်ပမာဏကိုဖြည့်ဆည်းရန်၎င်း၏အဆီကိုဖြိုခွဲသောအခါဇီဝြဖစ်သည်။ ဒါဟာအစဂလူးကို့စပါဝင်သည်။ သူမသည် ဦး နှောက်နှင့်အခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအတွက် “ဓာတ်ဆီ” အဖြစ်အမှုဆောင်သည်။ အားဂလိုက်ကိုးလိုင်းစ်ဆစ် ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမတိုင်မီဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပျက်စီးခြင်း၏တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု။ ဂလူးကို့စ်နည်းပါးပါကခန္ဓာကိုယ်မှအခြားသိုက်များမှထုတ်ယူရမည်။
ဒီအားဖြည့်ခြင်းကသင့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိတယ်။ လူတစ် ဦး သည် ရောဂါ ဖြစ်သည့်အခါအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သကြားလုံးများနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုလိုချင်တောင့်တသည်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။ အစားအစာပမာဏနှင့်ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Keto Guru သင် အစားအစာ ကိုလိုက်နာပါကသင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
၎င်းတို့သည်အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်။ အ ၀ လွန်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လိုသောအားအင်ပြည့်ဝ။ အားနည်းသောလိင်ဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုသူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကဒီထူးခြားတဲ့ကိရိယာ ကို အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည် –
မူမမှန်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊
အဘယ်ကြောင့်ပိုလျှံအလေးချိန်ကိုဖယ်ရှား နှင့်အတူ Keto Guru
ပိုလျှံသောအလေးချိန်သည်လူ ဦး ရေ၏သီးခြားအလွှာတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်နေရာတိုင်းတွင်တွေ့ကြုံရသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတိုင်းနီးပါးသည်အသက်အရွယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမကရင်ဆိုင်ရသည်။ သင်၏မုန်းသောကီလိုဂရမ်များကိုသင်ကိုယ်တိုင် ဖယ်ရှားရန် မလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့် Keto Guru တီထွင်ထားသောအရေပြားအောက်အဆီသိုက်များကိုလောင်ကျွမ်းနိုင်သောသတ္တဝါဖြစ်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏သဘာဝဖြစ်စဉ်များအပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်းတို့ကိုတည့်မတ်စွာသိုလှောင်ထားသည့်အရာများအားတည့်မတ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် Keto Guru ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးနှင့်အထူးသဖြင့်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ကလို အစားအစာ ကို သောက်သုံး ပြီးသူများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ပိုလျှံများ၏ပြဿနာကို တဦးတည်းအတွက်အလေးချိန် လူတိုင်းနီးပါးလမ်းသို့မဟုတ်အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ။ အချို့တွင်၎င်းသည်မမှန်ကန်သောအတွင်းပိုင်းဖြစ်စဉ်များ၊ အခြားသူများတွင် – ဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခု၊ အခြားသူများတွင်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနှင့်ပိုလျှံသောပေါင်များရှိသူများသည်ရူပဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာပြpများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည် –
အဆိုပါကိန်းဂဏန်းက၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှုဆုံးရှုံး, ဖြန့်ဖြန့်, ဖြစ်လာ;
ကြီးမားသော ၀ န်ဆောင်မှုသည် ယန္တရားပေါ်တွင်ကျသည်။ ၎င်းသည်ငယ်ရွယ်စဉ်တွင်နာတာရှည်ရောဂါများလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည်။
သို့မဟုတ်ချွေးထွက်ခြင်းများသည်အသက်ရှုခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ သွေးလည်ပတ်မှုချို့တဲ့ခြင်းတို့နှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်သည်။
စာရင်းကဆက်သွားသည်။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းသည်ရောဂါဖြစ်စေသောရောဂါလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်ပြည့်စုံမှုကိုခံစားနေရသောမည်သူမဆိုဗေဒဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုကိုကြုံတွေ့ရသည်။ လှပသောအဝတ်အစားများကိုမရွေးနိုင်ခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်ထံမှဂရုမစိုက်ခြင်း၊ လူမှုဘ ၀ ၏အရည်အသွေးယိုယွင်းခြင်း။ သို့သော်ယင်း ကို Keto Guru ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
အစားအစာကိုသိမ်းထားခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ကန့်သတ်ရန်၊ အဆီများသောပရိုတိန်းများကိုမှီခိုရန်၊ ၎င်းသည်ဖယ်ရှားရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် n အသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲရန်စီမံထားပြီးဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်သည်ယခင်အလေ့အထများကိုလုံလောက်စွာမတုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျလေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်ကို။
အသည်းဆဲလ်များတက်ကြွစွာကွဲထွက်သွားသောကြောင့်ကိုယ်ထည်သည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှသာအစာအာဟာရကိုထုတ်လုပ်တော့မည်ကိုသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ရဲ့အရေအတွက်ကများသောအားဖြင့်အပိုကီလိုဂရမ်များစွာကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ အချိန်အတော်ကြာစွာပင်ဒြပ်ထုသည်အတူတူပင်ဖြစ်နေပုံရသည်။
အလွန် အလောင်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုအလွန်အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးနေ့၌ပြီးသား ပြည်နယ်စေပါတယ် ;
Keto Guru အစားအစာ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကိုယ်အလေးချိန်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင် ပေမယ့် အစားအစာ ကိုပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲ။ ဒါဟာလူကြိုက်အများဆုံးအစားအစာကနေအကောင်းဆုံးထည့်သွင်းထားပါတယ် – ကအစားအသောက်အပေါ်ကန့်သတ်ပေးမထားဘူး, အဘယ်သူမျှမအားနည်းခြင်း, ရှိ၏ နေ့၌ပြီးသားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုပါ။
အစားအစာမှအစာအိမ်နှင့်အူထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုဤကိရိယာကစာသားတားဆီးပေးသည်။ သည် အပါအဝင်တုံ့ပြန်မှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒြပ်စင်များသည်ဂလူးကို့စ် သို့ဖြိုခွဲလိုက်ခြင်း၊ သွေးထဲတွင် ၄ င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုကျဆင်းလာခြင်း၊အသစ်များ ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ အဟောင်းများသည်စွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်သုံးစွဲကြသည်။
ဤအချက်ကြောင့် Keto Guru ရလဒ်ကိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်သည်။ သငျသညျချောချောမွေ့မွေ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်, အစာငတ်ခြင်း, အကျွမ်းတဝင်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ ဦး ဆောင်လမ်းပြကြဘူး စင်တီမီတာလျော့နည်းသွားပြီးချိုမြိန်သောတားမြစ်ထားသည့်အစားအစာများကိုစားချင်စိတ်နှင့်စွဲလန်းမှုများကျဆင်းသွားသည်။ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းသန္ဓေတားခြင်းအပါအ ၀ င်အသက်အကြီးဆုံးသိုက်များပင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်မှောက်တွင်အရည်ပျော်လျက်ရှိသည်။
ပထမနေ့မှစ။ – အဆီဆဲလ် များ၏ပြိုကွဲဖြစ်ပေါ်သော အလောင်းတွေ, တက်ကြွစွာ။ သငျသညျခွန်အား, လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမြင့်တက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
Keto Guru ဘယ်လိုကိုယ်အလေးချိန် နည်း?
ဆေးပြားများ၏လုပ်ဆောင်မှုသည် အစားအစာပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်အသည်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သော များဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ မရတဲ့အခါ, သို့မဟုတ်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အစာငတ်မွတ်။
အတွက် အစားအသောက်အာဟာရ, အဆီစွမ်းအင်သို့ကူးပြောင်းသည်နှင့်ထိုကွောငျ့ပဲငါတို့မျက်မှောက်၌ကွယ်ပျောက်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ကိုယ်အလေးချိန် ၇၅% ဖြစ်သင့်တဲ့အဆီပါတဲ့အစားအစာတွေကိုသင့်အစားအသောက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖို့လိုတယ်။ သို့သော်ပရိုတိန်းနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်သည် ၂၀% စီဖြစ်သင့်သည်။ နေ့စဉ်စားသုံးမှု Keto Guru ထပ်ထည့်ရန်သေချာစေပါ။ Keto Guru မရှိပါကိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှု၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသံုးျပဳနည္း Keto Guru?
နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာနှင့်ညစာမတိုင်မီနာရီဝက်အလိုတွင်၊ သင်သောက်ရေ ၁၀၀ မီလီမီတာရှိသည့်ရေတစ်ဘူးကိုပျော်ဝင်ပြီးသေးငယ်သောသောက်စရာများဖြင့်သောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုမှုကြာချိန်သည်အကန့်အသတ်မရှိပါ။ သင်၏ကန ဦး သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်လကြာသည်။ ဤကာလအတွင်းရရှိသောရလဒ်များကသင့်အားမကျေပွန်ပါကသင်တန်းကို ၇-၁၀ ရက်အတွင်းပြန်လည်သင်ကြားနိုင်သည်။
အသံုးျပဳနည္း Keto Guru:
မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သောအခါကာဗွန်ဓာတ်နည်းသောအစားအစာကိုလိုက်နာခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်ထည်နှင့်အဆီပြုပြင်ခြင်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အကယ်၍ အစားအစာတွင်ရှိသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏသည်အဆီပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကမူးယစ်ဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာသိသိသာသာလျော့နည်းလိမ့်မည်။
ဓာတ်ငွေ့မပါဘဲသန့်ရှင်းသောရေခွက်တစ်ခွက်တွင် တက်ဘလက်တစ်လုံးကိုပျော်ဝင်စေပြီးနံနက်တိုင်းတစ်နေ့အချည်းနှီးသောအစာအိမ်တစ်လုံးတွင်အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ ကြာအောင်သောက်ပါ။ မိနစ် ၄၀ မှ ၅၀ အကြာတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်စတင်ခဲ့သည်။
အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်ကြာသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၀ င်ခွင့်သင်တန်းသည်ရက်ပေါင်း ၁၀ မှ ၃၀ အတွင်းအကြားအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်အခြားသတ်မှတ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
Keto Guru သင်သည်မည်သည့်အစားအစာနှင့်အတူပေါင်းစပ်လို့မရပါဘူး, သို့သော်ဤကိစ္စတွင်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနိမ့်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အစားအစာနှင့်စုစုပေါင်းကယ်လိုရီထဲမှာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အတူအစားအစာများ၏အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်။
၎င်း၏ထူးခြားသောဖော်မြူလာကြောင့်သင်သည်ပြင်းထန်သောအာဟာရဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များနှင့် လက္ခဏာများကိုကိုင်တွယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤရွေ့ကားအမျိုးမျိုးသောရောဂါ, အာရုံ, အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်း, စဉ်းစား၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်တက်ကြွသောကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏလျော့ကျခြင်းတို့နှင့်အတူပုံမှန်အားဖြင့်သတိလစ်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းများဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်း၊ ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များပြိုကွဲလေ့ရှိသည်။
ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဆေးနှင့်သင်အလေးချိန်ကိုစိတ်ချစွာလျှော့ချနိုင်သည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုရလဒ်များအရဖြစ်သည်။ ကြွက်သားထုထည်ကျဆင်းခြင်း သို့) ဗီတာမင်ချို့တဲ့ခြင်းများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အာရုံကြော နှင့်အခြားစနစ်များ၏ အလုပ်တိုးတက် လိမ့်မည်။
ကိုယ်အလေးချိန် Keto Guru သည် အသည်းမှထုတ်သောလောင်စာအဖြစ်သိုက်များကို၎င်းတို့ဆီမှအဆီထုတ် ယူရန် သိုက်များကိုအသုံးပြု ခွင့်ပြုသည်။ သည်ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေသောဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစားအစာပမာဏကျဆင်းသွားပါကခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်အလေးချိန်ကိုအလုံခြုံဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသင်၏အဆီကိုစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းနိုင်သည်၊ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းနေ့များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ များစုဆောင်းခြင်းကို ဦး တည်သောဟော်မုန်းအင်ဆူလင်ပမာဏကိုလည်းလျော့နည်း စေသည်။ အထူးသဖြင့်သကြားဓာတ်နှင့်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက်မှန်ကန်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်အခြားသိမြင်မှုစွမ်းရည်။ သည် ဦး နှောက်အတွက်အကောင်းဆုံးလောင်စာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပိုမိုအာရုံစိုက်ပြီးအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည်စွမ်းအားမြင့်တက်ပြီးတစ်နေ့တာအတွင်းသင်ပိုမိုအားတက်လာလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင် Keto Guru ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများ ၏နံပါတ်ရှိပါတယ်:
၄ င်း၏အဆီများအားပြုပြင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည်။ ၎င်းသည်ခွန်အားကိုပေးသည်၊ ခွန်အားပေးသည်၊ အစွမ်းသတ္တိနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆို တိုးပွားစေသည်။
သငျသညျ နိုင်ပါတယ် တိရိစ္ဆာန်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဆီများ, အသား, စီရီရယ်, ကြက်ဥ, ငါး, နို့ထွက်ပစ္စည်းများအပါအဝင်ဘာမှစားပေမယ့်သင်ကအခြေခံကျကျမီနူးပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏလျှော့ချရန်လိုအပ်ပါတယ်;
မူးယစ်ဆေးဝါး၏ပံ့ပိုးမှုကြောင့်သင်သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ် – ခွန်အားမရှိခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများလည်ပတ်မှုအားနည်းခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုလျော့နည်းသွားခြင်း၊ လျစ်လျူရှုမှု၊ အားနည်းခြင်း၊
ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချသည်။ လူတစ် ဦး သည်ပုံမှန်လူနေမှုဘ ၀ ကိုမနေထိုင်နိုင်သည့်ပြင်းထန်သောခွန်အားဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်စနစ်များ၏ချွတ်ယွင်းမှုအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်ဗီတာမင်များနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများ၏ချို့တဲ့မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
၂-၃ ကြိမ်အနေဖြင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည်၊ သင်ပြpအများဆုံးဒေသများတွင်ကြွက်သားသက်သာစေရန်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
ဆံပင်၊ အရေပြား၊ လက်သည်း၊ ကြွက်သားထုထည်များကျဆင်းခြင်း၊ ခွန်အားမရှိခြင်း၊ မူးဝြေခင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊
Keto Guru သောက်နေစဉ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက်အပိုဆုကြေးအချို့ပေးသည်။ ဤအာဟာရဖြည့်နည်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါအရေပြားအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ကိုလက်စထရောအဆင့်ပုံမှန်နှင့်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းသို့ပြန်သွားပါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ ကယ်လိုရီများကိုရေတွက်။ မရ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နေ့တာတွင်ပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုများကိုမခံစားရနိုင်သည့်အပြင်အစာနည်းနည်းစားသည်။
ဖွဲ့စည်းမှု နဲ့ အဘယျသို့ မြင်းများမှာ?
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လျှော့ချခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသတ္တဝါများသည်အဆီများကြီးထွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ခြံစည်းရိုးများဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ စွမ်းအင်ရရှိရန်အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာသည်ချို့တဲ့မှုနှင့်အတူ၎င်း၏သိုက်များကိုဖြုန်းတီးသောကြောင့်လူတစ် ဦး သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်။ နိမ့်- အစားအစာ, သောက်စရာများအပြင် Keto Guru တစ်ပါးလွှာပုံများအတွက်ရန်ပွဲအတွက်အစွမ်းထက်လက်ထောက် -။
လက်ငင်းဆေးပြား၏လုပ်ဆောင်မှု၏အခြေခံနိယာမ Keto Guru သည် ကိုအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှ ရရှိရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အတွက် အကြောင်းကို 40-50 မိနစ် အလောင်းတွေစွမ်းအင်သို့ပိုလျှံအရေပြားအောက်ဆုံးအဆီလှည့်အရာ, ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ မင်းရဲ့ပုံကပါးလွှာပြီးလိင်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏လုပ်ဆောင်ချက်၏အဓိကအဆင့်များထဲတွင်
ထုတ်ကုန် ၏ ဖွဲ့စည်းမှု ) Keto Guru အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောကိုယ်အလေးချိန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသော အားလုံးတက်ကြွ အစိတ်အပိုင်းများ ) ပါဝင်သည်။
Vitamin B6Pyridoxine)။ သဟဇာတများအတွက်ဗီဇကိုသက်ဝင်စေသည်။ ဟီမိုဂလိုဗင်ဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
GABA γ – Aminobutyric အက်ဆစ်။ မြင့်မားသောအာရုံကြော၊ စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုဟော်မုန်းများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊
Vitamin B3 Niacin)။ သွေးလက်စထရောကိုလျော့နည်းစေတယ်။ ရေ – ဆားချိန်ခွင်လျှာကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသောကြောင့်အစွန်းများရောင်ရမ်းခြင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ပိုတက်စီယမ်။ အဆစ်ခိုင်မာစေရန်ကူညီပေးသည်။ ဆဲလ်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးများ၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။
L- Glutamine။ အရေးကြီးသောစွမ်းအင်ကိုတိုးပွားစေသည်၊ အဆီပိုလျှံကိုလောင်ကျွမ်းစေသော်လည်းကြွက်သားထုကိုဆုံးရှုံးစေသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်။ ကြွက်သားတင်းတင်းသက်သာခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
ကျွမ်းကျင်သောအချက်များ Keto Guru
အသည်းနှင့်ကြွက်သားများအတွင်းရှိဂလိုင်ကိုဂျင်ကုန်ပစ္စည်းများလုံးဝကုန်သွားသောအခါ ဖြစ်စဉ်စတင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အဆီဆဲလ်များသည်အဆီအက်ဆစ်များနှင့်ဂလိုက်စီရင်သို့ခွဲထွက်ပြီး၎င်းတို့ကို သို့ပြောင်းသည်။ ထိုအခါ အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်လာ ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက ၁၀ ရက်လောက်ကြာတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများက အကြံပြု ကို ဖြည့် Keto Guru ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက် လုပ်ငန်းစဉ်တက်မြန်နှုန်းရန်။ ၎င်းကိရိယာသည်ခန္ဓာကိုယ်အားငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုငြိမ်းစေနိုင်ပြီးဗီတာမင်များဖြင့်ပြည့်နှက်စေသည်။ သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးမှာမူးယစ်ဆေးဝါး၏တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများသည်အဆီပိုများလာခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်များစုပ်ယူခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
ထို့အပြင် ဖိုရမ်များ တွင် ဤကိရိယာ နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ထင်မြင်ချက်များ များစွာသော အသုံးပြုသူများ အကြား တွေ့နိုင်သည်။
အဘယ်မှာဝယ်ပါရန် Keto Guru?
ထုတ်လုပ်သူ Keto Guru သည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုသာမကဂရုစိုက်သည်။ သင် ၀ ယ်ယူရန်အတွက်သင့်လျော်သောအခြေအနေများဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုပ်ပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်၏သက်သေပြမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကြီးမားသောအထူးလျှော့စျေးများဖြင့်အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်နှင့်သာယာသောအရောင်းမြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည် ကြိုတင်မှာယူ မှုများ၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနည်းလမ်းများရွေးချယ်ခြင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း များအတွက်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။
ဒုတိယ လျှော့စျေး – အဆီကို ၅၀% နှင့်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်မည့်ထူးခြားသောသဘာဝဆေးဝါးကိုအလျင်အမြန်မှာယူ ပါ။
Previous articleiFocus မြန်မာ, စျေးနှုန်း, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်, အသံုးျပဳနည္း – မ်က္လုံးႂကြက္သားအေထာက္အပံ့
Next articleOnycosolve +Plus Set Türkiye nasıl kullanılır, yorum, fiyatı: mantar enfeksiyonlarina son verin
iFocus မြန်မာ, စျေးနှုန်း, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်, အသံုးျပဳနည္း – မ်က္လုံးႂကြက္သားအေထာက္အပံ့
Rosanna R. Albertson - July 3, 2020 0
iFocus အသံုးျပဳနည္း, အကျိုးကျေးဇူးများ, စျေးနှုန်း, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်, တကယ့္ရလဒ္အစစ္, ဖိုရမ်
India Rosanna R. Albertson - August 13, 2020 0
Greenherb ประเทศไทย, ราคา, วิธี ใช้ ยา, รีวิว – ช่วยให้ร่างกายของคุณกำจัดน้ำหนักส่วนเกิน!
Thailand Rosanna R. Albertson - August 12, 2020 0
Greenherb ราคา, คือ อะไร, ดีไหม, ราคาเท่าไร, พันทิป
Rockman Indonesia, harga, cara pakai, komentar pemakai – kapsul untuk potensi seksual
Indonesia Rosanna R. Albertson - August 11, 2020 0
Rockman harga, fungsi, kelebihan, cara pakai, apakah, khasiat, agen Rockman asli
Ireland Rosanna R. Albertson - August 11, 2020 0
O.K. Look Great Britain, price, how to use, comments – best natural eye capsules to improve vision
United Kingdom Rosanna R. Albertson - August 11, 2020 0
O.K. Look where to buy, online order, reviews, side effects, comments